I-Excel Formula Yokuhlela Ukubuyekezwa Komphakathi ngosuku lweviki | Martech Zone
NgoMsombuluko, Novemba 2, 2020 NgoMsombuluko, Novemba 2, 2020 Douglas Karr
Elinye lamakhasimende esisebenza nalo linesikhathi sonyaka esifanelekile ebhizinisini labo. Ngenxa yalokhu, sithanda ukuhlela ukubuyekezwa kwemithombo yezokuxhumana kude kakhulu nesikhathi ukuze kungadingeki bakhathazeke ngokushaya lezo zinsuku nezikhathi ezithile.
Iningi lamapulatifomu wokushicilela ezokuxhum ahlinzeka ngamandla okulayisha ngobuningi ukuhlela ikhalenda lakho lezokuxhumana. Kusukela I-Agorapulse ungumxhasi we Martech Zone, Ngizokuhamba ngenqubo yabo. Njengokubheka, baphinde banikele ngokuguquguquka okuncane lapho ulayisha ifayili lakho elihlukaniswe ngokhefana (CSV) ngoba empeleni ungabeka imephu kukholamu lefayela lakho kunokuba ube namakhodi aqinile.
Lapho sakha ifayili le-CSV, asifuni ukumane nje sibambe i-tweet izinsuku eziyi-7 ngeviki ngesikhathi esifanayo. Sifuna ukusetha i-CSV ngezinsuku ezithile zamaviki nakwezinye izikhathi ezingahleliwe njalo ekuseni. Kulesi sibonelo, ngizogcwalisa ispredishithi ngezibuyekezo zokuxhumana nomphakathi ekuseni ngoMsombuluko, ngoLwesithathu nangoLwesihlanu.
Amafomula we-Excel Wokubala Usuku Lweviki
Qiniseka ukuthi uqala ngeSpredishithi se-Excel, hhayi ifayela le-CSV, ngoba sizosebenzisa Amafomula we-Excel bese uthumela ifayela kufomethi ye-CSV. Amakholomu ami alula kakhulu: Usuku, Umbhalo, Futhi I-URL. Esitokisini A2, ifomula lami ukuthola uMsombuluko wokuqala ngemuva kwanamuhla. Ngizobeka nesikhathi kuze kube ngu-8 ekuseni.
Le fomula igxumela esontweni elizayo bese ithola uMsombuluko esontweni. Esitokisini A3, ngidinga nje ukwengeza izinsuku ezi-2 kuDethi ku-A2 ukuthola usuku lwangoLwesithathu:
Manje, esitokisini A4, ngizofaka izinsuku ezi-4 ukuze ngithole usuku lwangoLwesihlanu:
Asikaqedi okwamanje. Ku-Excel, singahudula ngokuzenzakalela uchungechunge lwamaseli we-Excel ukubala ngokuzenzakalela amafomula emigqeni elandelayo. Imigqa yethu emithathu elandelayo izokwengeza isonto ezinkambeni zethu ezibaliwe ngenhla. A3, A5, A6, A7, A8, no-A9 ngokulandelana:
Manje, ungavele uhudule ifomula lezibuyekezo eziningi ongathanda ukuzingenisa.
Izikhathi Ezingahleliwe ku-Excel
Manje njengoba sesinazo zonke izinsuku zethu ezibekiwe, kungenzeka singafuni ukushicilela ngesikhathi esifanele. Ngakho-ke, ngizofaka ikholomu eceleni kwekholomu A bese kukholamu B, ngizofaka inombolo engahleliwe yendlu nemizuzu nesikhathi kukholamu A, kepha ungadluli emini:
Manje vele uhudule ifomula phansi usuke ku-B2:
Lapho siya khona! Manje sesinekholamu yezinsuku zangoMsombuluko, uLwesithathu, nangoLwesihlanu ezinezikhathi ezingahleliwe phakathi kuka-8 ekuseni kuya emini. Qiniseka ukuthi ugcine i-Excel Spreadsheet (AS Excel) yakho manje. Singafuna ukubuyela kulesi sipredishithi ikota ngayinye noma unyaka ngamunye njengoba sihlela izibuyekezo zomphakathi ezilandelayo.
Ikopisha Amanani ku-Excel
Khetha Hlela> Kopisha kusuka kwimenyu yakho ye-Excel bese uvula i-Excel Worksheet entsha - leli kuzoba ishidi lokusebenza esilithumela ku-CSV. Unganamathiseli ikholomu okwamanje. Uma wenza kanjalo, amafomula azonamathiselwa hhayi amanani wangempela. Kwiphepha lokusebenzela elisha, Khetha Hlela> Namathisela Okukhethekile:
Lokhu kunikeza iwindi lengxoxo lapho ungakhetha khona amanani:
Ngabe kunamathiselwe inombolo enedesimali? Akunazinkathazo - kufanele nje ufomethe ikholomu njengosuku nesikhathi.
Futhi manje usunedatha oyidingayo! Manje usungagcwalisa izibuyekezo zomphakathi futhi ungeze izixhumanisi. Zulazulela ku- Ifayela> Gcina Njenge Bese ukhetha Amanani Ahlukaniswe Ngukhefana (.csv) njengakho Ifayela Ifomethi. Lokho kuzoba yi ukulayishwa kwenqwaba fayela ongalingenisa ohlelweni lwakho lokushicilela imidiya yokuxhumana nabantu.
Uma usebenzisa I-Agorapulse, manje usungasebenzisa isici sabo sokulayisha ubuningi ukuze ulayishe futhi uhlele izibuyekezo zakho zenhlalo
Ungakufaka Kanjani Ukuvuselelwa Kwezenhlalo ku-Agorapulse
Ukudalulwa: Ngingu-an I-Agorapulse Inxusa.
Tags: agorapulseukulayishwa kwenqwabakakhuluukwenza kahle ukubala usukuukugqama amafomulaisikhathi esingahleliwe siphumelelaukuhlela ama-tweets
U-Alison Ver Halen
Nov 15, 2020 ngo-2: 01 PM
Siyabonga ngamathiphu amahle! Ngawo wonke amathuluzi wokuhlela laphaya, bengingeke ngicabange ukusebenzisa i-Excel nje.